Zvemagariro Midhiya uye Yako Bhizinesi Kutaurirana Sarudzo | Martech Zone
Svondo, July 31, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Yemagariro yakaburitsa iyi yekutanga infographic pasocial media kune bhizinesi. Iyo infographic inopa muongororwo wekuti nei makambani ari kushandisa vezvenhau, masvikiro avari kushandisa uye maitiro avo. Dzimwe nguva tinopinda mukati memasora enhau enhau uye maratidziro aingaita maitiro ekutsvaga nekutsvaga kwekushambadzira, asi zvakakosha kuti ugare wakanangana nekubudirira kwega kwega kunowanikwa nemasvikiro ekungotaura nevatengi vako netarisiro.
Zvemagariro midhiya ndezve kungopfuura kushambadzira uye kushambadzira - iri kukurumidza kuve chikamu chakakosha chevatengi kusvika kune zvigadzirwa. Kuwedzera pakushandisa mapuratifomu eruzhinji kuongorora hurukuro nezve indasitiri yavo, vakwikwidzi, uye zvigadzirwa, makambani ari kuwedzera kusvika kune vatengi vavo kuburikidza newebhusaiti kuti vataure mameseji nezve izvo zvavanofanira kupa. Muchokwadi, vezvenhau vezvemagariro vari kushandura matauriro anoita masangano - maturusi mazhinji ezvemagariro aripo nhasi anodhura kwazvo achienzaniswa nenzira dzechinyakare dzakadai seemail uye kushambadzira kwepamhepo.
Ini zvakare ndinotenda chokwadi chekuti iyo infographic inosanganisira kublogi - yakawanda yenguva zano repakati kune chero eruzhinji midhiya enhau.
Kufarirwa kwePurogiramu yeMitauro
Nov 15, 2011 na11:48 AM
Yakanaka infographic. Ini ndinobvumirana nemapoinzi - social media inogona kuve chishandiso chakanakisa kumabhizinesi, asi ini ndinofunga kuti chinhu chikuru chekurangarira kana uchiishandisa ndechekuti chinoita kuti ive yakanaka ndeye kana vatengi vachinyatso kupindirana. Kana paine mumwe munhu kune rimwe divi rekutaura naye, anotora mibvunzo yavo zvakakomba, saka izvo zvine simba chaizvo. Izvo zvinonyanya kubhoikana kune yakanaka yekare yekare sevhisi yevatengi.